KUNAMANAZARETHA akhala ngoNyazilwezulu, athi selwenza okungajwayelekile ebandleni Isithombe: SIGCINIWE
Thokozani Ndlovu | September 20, 2021
KUNAMANAZARETHA ashaya amakhala ngobengumholi waseBuhleni, uMnuz Mduduze “Nyazilwezulu” Shembe, athi usenza izinto ezethusayo wona angakaze azibone zenziwa ebandleni lamaNazaretha.
Umthombo weSolezwe ngeSonto ongaphakathi ebandleni, uthe sekushayisana nemibono emalungwini ebandla athi asebona sengathi akusakhonzwa uShembe ngendlela okwenziwa ngayo.
“Ngeledlule uNyazi beluvakashele eNtabazwe. Lufike khona kwahlatshwa izimbuzi ezine nezinkomo. Okumangazile nokungakaze kwenzeke ebandleni wukuthi (uNyazi) lucele ukuthi enye imbuzi ishiswe ize iphelele emlilweni. Nenyama yezinkomo ezihlatshiwe luthe abantu abangayidleli khona kodwa abasikelane bahambe nayo bayoyidla emakhaya. Abanye abefundisi bayidubile njengoba bese kubuzwana ukuthi inani le nyama okuthiwa mayingadlelwa eNtabazwe. Ngokujwayelekile umholi uhlaba izinkomo ngenhloso yokuthi kudle abazalwane asuke enabo ngaleso sikhathi. Ukukhipha umyalelo wokuthi inyama akuhanjwe nayo kubadidile abafundisi, yingakho abanye bengayithathanga le nyama,” kusho umthombo.
Omunye umthombo ukhale nangeminikelo, othe isiqoqwa ngenye indlela engajwayelekile.
“Inkinga iqala ukudlanga manje njengoba kunesicelo esifakwa wukuKhanyakwelanga (iNkosi Phinda Shembe) enkantolo sokuthi kuphoqwe uNyazi ukuthi lusuke esihlalweni. Kumanje uNyazi alusafuni ukuthi amakholwa azonikela kulona ngqo, okuyinto ayithandayo amaNazaretha ukunikela kumholi ngqo. Seluthumela abashumayeli ukuthi bathathe umnikelo, bese bewuletha kulona ngisho lukhona lapho kunikelwa khona. Sekuke kwavela ukuthi luthi lusaba indaba yesicelo sokuthi lugudluzwe esihlalweni, esifakwa enkantolo. Lokho yinto ekhulunywayo nasebandleni, okuyiyona eyenza lusabe ukubonakala lunikelisa. Okubuhlungu wukuthi amaNazaretha awakhululeki ukunikela komunye umuntu ekhona umholi ngoba asuke efuna ukuthola izibusiso kuyena,” kusho umthombo.
Okhulumela uNyazilwezulu, uMnuz Thokozani Mncwabe uthe yena akayiboni inkinga ngalokho.
“Angifuni ukuvuma noma ukuphika ukuthi lokho okushiwo ngabantu kwenzekile yini, kodwa umholi nguyena osuke exhumana noNkulunkulu kwaShembe. Uma izwi likhulume kuyena, ukuthi kumele imbuzi ishiswe akekho ongamphikisa nongafuna incazelo ngalokho. Ngisho nasebhayibhelini kuyavela ukuthi umnikelo wesilwane wawushiswa uze uphele, okusho ukuthi akukho okuphambana nenkolo kulokho. Ngokokunikela, umholi kuyenzeka akhiphe abafundisi noma abashumayeli ukuthi bamqoqele wona. Akukho okubi ngalokho. Kuya ngokuthi uthande ukwenzani ngaleso sikhathi,” kusho uMncwabe.